The yemasvomhu vakaverenga mutengo bitcoin nokuda 2018 - Blockchain News
Mubayiro Bitcoin nokuda 2018
On January 22, mushandisi Medium Joel Lopez Barata akabudisa pambiru: “Ini vakaverenga mutengo bitcoin yose gore 2018. Hamunganditendi nei! “Pamwe Disclaimer” ichi inongova pfungwa, kwete mari kanzuru. ” Lopez kwakaita masvomhu dzinobva pfungwa kuti unhu bitcoin mune ramangwana achaita anoenderana maitiro ake kare. In iyi, Lopez inokurukura bitcoin “mari utano”, uye Fiat – aihwa: “The ramangwana purofiti achava akaenzana wokupedzisira, apo vanhu vakawanda vanonzwisisa kuti bitcoin ndiyo mari yakanakisisa.”
The Lopez simulation inobva Monte Carlo nzira. Ichi zvakawanda computational algorithms kuti vanovimba akadzokorora anongoitika ivhu. In iyi, Lopez anoshandisa nezuva dhora mari bitcoin kunzwisisa kuti fungidzira mutengo achava pakazopera 2018.
Kuverenga daily purofiti, iye anokamura kuitika bitcoin mutengo nomutengo rekupedzisira uye subtracts kuti chikwata: “Achitaura pamusoro Monte Carlo simulation mu mari, taifunga kuti remangwana mutengo maitiro ari kunobatsira achava akafanana kwayo kare maitiro, nokusika yakawanda anongoitika shanduro ramangwana ichi , rinozikamwa mu masvomhu sezvo “chibhubhubhu famba”. Wakazara remitemo kusika munhu simulation yakadaro iripo pamusoro GitHub.
To musimbisane kurongwa kufamba muenzaniso ari simulation, mumwe anofanira kutora anongoitika mimwe mubereko nezuva kubva 2010 kuti nhasi, wedzera navo chipeta cumulatively kusvikira December 31, 2018. Mushure maizvozvo, kuitika mutengo bitcoin zvikawanda kukosha munhu asingashumbi kufamba, uye mugumisiro uri simulation of mutengo ramangwana. Izvi zvinofanira kuitwa nguva zhinji (muchiitiko ichi – 100,000 nguva), uye pakupera kwegore tichaona wokupedzisira mutengo kuparadzirwa mumwe asingashumbi kufamba.
wokutanga 200 pamusoro 100,000 anongoitika famba seizvi:
Zvakaratidza kuti kwokupedzisira mutengo kuti kupfuura chero anofamba neeSultan kubva $ 10,000 kuti $ 100,000. Zvinotevera dhayagiramu rinoratidza kuparadzira wokupedzisira mitengo vose 100,000 chibhubhubhu famba:
Zvinoratidza kuti ungangotarisa mutengo kunosiyana-siyana pakati $ 24,000 uye $ 90,000. Kurinzwisisa zvakawanda chaizvo, pane nzira dzakawanda. Chekutanga, unogona kungoti ngaaverenge 50% -fung percentile of kuparadzirwa okupedzisira mitengo. Zvichava akaenzana $ 58,843. Chimwe nzira iri kuverenga mukana arambe achirema basa uchishandisa renyukireya arambe achirema Zvinofungidzirwa uye kuwana mutengo chaienzanirana vaifanira kuti basa iri – $ 55,530.
Asi ichi hachisi yokupedzisira chakarurama, zvichiri nani kurishandisa kuwana chivimbo penguva. Nokuti bitcoin mutengo, ari 80% chivimbo penguva achava $ 13,200 – $ 271,277. Iye Inotaurawo kuti mikana kuti pakazopera gore mutengo achava pazasi $ 13,200 vakafanana mikana kuti zvichava pamusoro $ 271,277.
Zvino kuti renyukireya arambe achirema kufungidzira anozikamwa, zvinobvira ngaaverenge mukana kuti mutengo bitcoin vachawira pakazopera gore hama kuti mumwe chakarurama. Zvikuru sei, mukana kuti mutengo zvichava yakaderera kana akaenzana ufanane January 20 ($ 12,000), ndizvo 9.84%.
Mastercard bvumidzwa nhamo ...
Previous Post:Kurwisa nezvombo chakaitwa musi Canadian Crypto Exchange
Next Post:Blockchain News 26 Ndira 2018